A,B,G,M,P,T बाट नाम आउने यी युवतीहरु प्रेममा बफादार हुन्छन ! कारण यस्तो छ ! - Khabar Lekali
केही युवतीहरु युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् भने कोही युवतीहरु भने सोच विचार गरेर मात्रै प्रेम गर्छन् । प्रेमदेखि विवाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने युवतीहरु आफैमा बौद्धिक हुन्छन् । उनीहरुलाई समझदार मानिन्छ तर, पहिला नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरु कस्ता हुन्छन् होला ? उनीहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? र उनीहरुको प्रेम कति समयसम्म टिक्छ त ? आउनुहोस् जानाैँ पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरुको बारेमा ।
T नामका युवती : यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती छिट्टै प्रेममा पर्छन् तर व्यक्त गर्नलाई हिच्किचाउँछन् । तर यिनीहरु आफ्नो प्रेम पाउनको लागि जे पनि गर्छन् । र जीन्दगीभर आफ्नो साथीको साथ छोड्दैनन् । -एजेन्सी
Share this… Facebook0Twitter Linkedin तीजमा शिव–पार्वतीलाई कुन राशि भएकाहरुले के चढाउने ? तीज पर्व हिन्दू महिलाहरुका लागि विषेश दिन हो । तीजको दिन विवाहित नारीहरु स्रोह श्रृगांरमा सजिएर आफ्नो पति तथा परिवारको सुखको कामना गर्दछन् । मान्यता अनुसार तीजका दिन शिवपार्वतीको पूजा गरे पतिको लामो आयु हुने विश्वास गरिन्छ । शिव पार्वतिको आरधना […]